အသာ မီလို နဲ့ ယာနစ် တို့ အလဲထပ် အပြောင်းအရွှေ့မှာ အသာစီးရသွားတာက ဂျူဗီ လား? ဘာကာ လား? - SPORTS MYANMAR
အသာ မီလို နဲ့ ယာနစ် တို့ အလဲထပ် အပြောင်းအရွှေ့မှာ အသာစီးရသွားတာက ဂျူဗီ လား? ဘာကာ လား?
“ အာသာ ကစားပုံ ကို ကြည့်ရတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကွင်းထဲမှာ ပြန်ရောက်နေသလို ပါပဲ။ သူရဲ့ ဘောလုံး တွေးခေါ်ပုံ က လျှင်မြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်လိုမျိုး ဘာစီလိုနာ မှာ စွမ်းဆောင်ပြဖို့ အတွက် ဆိုရင်တော့ ကြိုးစားမှုတွေ အများကြီးလုပ်ရဦးမှာပါ။ ကျနော် ကိုယ်တိုင်လဲ တစ်ပွဲချင်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရင်း နဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တာလေ။
အရွယ်ချင်း ပြန်ချိန်ကြည့်လိုက်တော့ အာသာ ကတောင် ကစားပုံက ပိုပြီး ရင့်ကျက်သလိုပါပဲ။ ကွင်းလယ် ကစားသမား တစ်ယောက် ရဲ့ အဓိက တာဝန်ဟာ ဘောလုံး မဆုံးရှုံးဖို့ မဟုတ်လား။ သူဟာ ဘောလုံးကို သေချာ ကိုင်ထားနိုင်သလို ၊ ကောင်းကောင်းလဲ ကစားပြနိုင်ပါတယ်။ ကျနော့် အမြင်မှာတော့ သူ့မှာ အလားအလာကောင်းတွေ အများကြီး ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ”
ဒီစကား ဟာ အာသာမီလို ဘာစီလိုနာ ကို ရောက်ရှိ လာချိန်က ၊ ဂန္တဝင် ကွင်းလယ် ကစားသမားကြီး ဇာဗီ ကိုယ်တိုင် ပြောဆိုခဲ့တဲ့ စကားပါ။ အခုတော့ အားလုံးဟာ အတိတ်မှာပဲ ကျန်နေခဲ့တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာ ဟာ သူတို့ ရဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား အာသာ မီလို ကို ကနဦး ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို 72 သန်း + စွမ်းဆောင်မှု ပိုင်းဆိုင်ရာ နောက်ထပ် ပေးချမှု ယူရို 10 သန်း နဲ့ ဂျူဗီထံ ရောင်းချ လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျူဗီ ကတော့ ယာနစ် ကို ကနဦး ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို သန်း 60 + စွမ်းဆောင်မှုပိုင်း ဆိုင်ရာ ပေးချေမှု ယူရို5သန်း နဲ့ ဘာစီလိုနာ ဆီကို ရောင်းချလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် ငွေပေးချေမှု ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်တွေ မှာတော့ နှစ်ဖက် စလုံးဟာ ချက်ခြင်း ပေးဆောင်စရာ မလိုပဲ ၊ နောက်4နှစ် အတွင်းမှာ အပြန်အလှန် အရစ်ကျစီ ပေးချေရမှာပါ။ အပြောင်းအရွှေ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ အရတော့ ဘာစီလိုနာ ဟာ အလိုက်ကြေးအဖြစ် ယူရို 17 သန်း လောက် ရရှိသွားတယ်လို့ အကြမ်းဖျင်း သုံးသပ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
သို့သော် ဘာစီလိုနာ ပြန်ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ ကစားသမား ယာနစ် က အသက် 30 အရွယ် ရှိနေပြီ ဖြစ်သလို ၊ အာသာ မီလိုထက် ပိုပြီးတော့လဲ လစာပေးချေမှုတွေ ပြုလုပ်လိုက်ရပါတယ်။ ကတ်တလန် သတင်းတွေ အရ ဂျူဗီက ဘော့စနီးယား ကစားသမား ကို ပေးချေထားတဲ့ တစ်နှစ် လုပ်ခ ယူရို 7.5 သန်း နှုန်း အတိုင်း ပေးထားတယ်လို့ သိရပြီး ၊4နှစ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုကာ ၊ စာချုပ် ဖျက်သိမ်းကြေး ကို ယူရို သန်း 400 အထိ သတ်မှတ် သွားခဲ့ပါတယ်။
အာသာ မီလိုဟာ ဂျူဗီ ကို ပြောင်းရွှေ့လာလု့ိ ဘာစီလိုနာမှာ ရရှိနေတဲ့ လစာ ပမာဏထက် ပိုပြီး ရယူသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ဂျူဗီ ဘက်က အများကြီး ပိုပေးလို့ ရတာမျိုးထက် ၊ အီတလီ ရဲ့ အခွန်လျှော့ပေးထားတဲ့ ဥပဒေကြောင့် အကျိုးခံစားခွင့် ကြီးမားသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဂျူဗီဟာ ယာနစ် ကို ပေးနေရတဲ့ တစ်နှစ် လုပ်ခ ယူရို 7.5 သန်း အထိ ပေးချေရတာမျိုး မရှိတာမို့ ၊ အလိုက်ကြေး ပေးရတာ ကလဲ လွဲရင် အများကြီး အသာစီး ရတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဂျူဗီ တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ဘရာဇီးကွင်းလယ်လူ ကို5နှစ် စာချုပ် အထိ ချုပ်ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ဂျူဗီ နည်းပြ ဆာရီ ဟာ သူ့ရဲ့ နာမည်ကျော်ကြားလှတဲ့ ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိတဲ့ ကစားဟန် ကို ပုံဖော် နိုင်ဖို့ အတွက် ကွင်းလယ် မှာ ဘောလုံးကိုင်ပြီး ကစားနိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက် ကို လိုချင်နေတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ တပည့်ကျော်ကြီး ဂျောဂျင်ဟို ကို ခေါ်ယူဖို့ အတွက် ၊ ယာနစ် နဲ့ အလဲအထပ် လုပ်မလား ဆိုတဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုတွေ နဲ့ ချဲဆီးထံ ချဉ်းကပ်ခဲ့ပေမယ့် ၊ မာရီယာ တို့ တစ်သိုက်က စိတ်မဝင်စားဘူး ဆိုပြီး ငြင်းဆန်ထားခဲ့တာပါ။
ဂျူဗီဟာ ကွင်းလယ်မှာ ရမ်ဆေး ၊ ရာဘီယို့ ၊ မာတွီဒီ ၊ ဘန်ကန်ကာ တို့လို ကစားသမားမျိုးတွေ ရှိနေတာကြောင့် ၊ ယာနစ် ဟာ အသင်းရဲ့ အရေးပါတဲ့ ကစားသမားမျိုး မဟုတ်လို့ ရောင်းထုတ်ဖို့ ချောင်းနေတာ ကြာပါပြီ။ ဒီကြားထဲမှာ တိုက်စစ်က ဘယ်သန် ကစားသမားတွေ ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်ကလပ် ကော်စတာ ၊ ဒီဘာလား တို့လို ကစားသမားတွေ နဲ့ တွဲဖက် ကစားနိုင်မယ့် ဘယ်သန် ကွင်းလယ် ကစားသမား နောက်တစ်ယောက် ကို ဦးစားပေး ရှာဖွေနေချိန်မှာ အာသာ မီလို ကို တွေ့ရှိသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာသာ မီလို ရဲ့ အသင်းဟောင်း ဂရီမီယို ဟာ ဘာစီလိုနာ ကို ရောင်းချစဉ်က ၊ တဆင့်ခံ ပြန်လည် ရောင်းချမယ် ဆိုရင် နောက်ထပ် 3.5% ဆက်လက် ပေးချေရမယ့် အချက် ထည့်သွင်းခဲ့တာကြောင့် ၊ ဘာစီလိုနာ အနေနဲ့ အသားတင် ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို 72 သန်း ဆိုရင်တောင် ၊ ဘရာဇီး ကလပ် ကို ယူရို 2.5 သန်း လွှဲပြောင်းပေးရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကတ်တလန် သတင်းစာတွေကတော့ ဘာစီလိုနာ အနေနဲ့ အသင်းနဲ့ အံ့မဝင်တဲ့ အာသာ ကို ဆက်ထိန်းထားမယ် ဆိုရင် ၊ ဂရီမီယို အသင်းကို စွမ်းဆောင်မှု ပိုင်းဆိုင်ရာ ပေးချေမှု ယူရို သန်း 20 ပေးရဦးမယ့်မို့ ၊ လက်ရှိ မှာတော့ အဲဒီ အချက်ကနေ လွတ်မြောက်သွားပြီလို့ အကောင်းဘက်ကနေ မြင်ပြီး ရေးသားနေကြသလို ၊ ယာနစ် ရဲ့ ဖရီးကစ် ကနေ ဂိုးသွင်းယူမှုက ရိုနာဒိုထက်တောင် ပိုပြီးတော့ ကောင်းမွန်နေတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကိုပါ အသားပေးနေကြပါတယ်။
အီတလီ သတင်းစာတွေ ကတော့ အသက် 30 အရွယ် အသုံးမလိုတော့တဲ့ ကစားသမားကို ၊ ယူရို သန်း 60 အထိ ပေးခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ ဟာ ဂျင်းမိသွားတာ ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးနေကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိ စာချုပ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပါက ယာနစ် ရဲ့ အသက်ဟာ 34 နှစ် ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်လို့ ၊ တန်ဖိုး က အတော်လေးကို ကျဆင်းသွားမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ၊ အာသာ မီလို ကတော့ 28 နှစ် ဝန်းကျင် ဖြစ်နေလို့ ကစားသမားဘ၀ အမြင့်ဆုံး အချိန်တစ်ခု ဖြတ်သန်းနေရလိမ့်မယ်လို့ တုန့်ပြန် ရေးသားထားပါတယ်။
ကစားသမား နှစ်ယောက် စလုံးရဲ့ ဒီရာသီ စွမ်းဆောင်ရည်များ
အမည် – အာသာ မီလို
ကစားသည့် မီးနစ်ပေါင်း – 1541
သွင်းဂိုး – 4
ဂိုးဖန်တီးမှု – 4
အမည် – ယာနစ်
ကစားသည့် မီးနစ်ပေါင်း – 2902
သွင်းဂိုး – 3